Door Ke Darshan(2020) | MM Movie Store
Door Ke Darshan(2020)
ကား မတျောတဆမှုတဈခုကွောငျ့ ဒရျရှနျဆိုတဲ့ အဖှားကွီးတဈယောကျ ကိုမာဝငျပွီး သတိလဈနခေဲ့ပါတယျ။ဆူနီးလျဘတဂြောဟာ မိနျးမနဲ့ ကှာခါနီးအခွအေနဖွေဈနပွေီး သူက သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးကို အကူအညီတောငျးတယျ….
အမနေကေောငျးတဲ့အခါ အိမျပျေါက ဆငျးပေးပါ့မယျဆိုပွီး အိမျမှာကပျနပေါတယျ…ကပျနတေဲ့ကာလကလညျးသိပျမမြားရှာပါဘူး …နှဈ(၃၀)ပဲရှိပါသေးတယျ….သားသမီးတှတေောငျအရှယျရောကျကုနျပွီ…အိမျရှငျဖွဈတဲ့သူငယျခငျြးကလညျး သူ့ကတိအတိုငျး အမနေကေောငျးပွနျသတိရမှ ဆငျးဖို့သဘောတူထားလတေော့နှငျခဖြို့လညျးတိုငျပတျနတေယျ…
ဒီလိုနဲ့ နှဈ(၃၀)ပွညျ့ပွီးလို့ တဈရကျမှာ အမယျအိုကွီးသတိရလာတဲ့အခါမှာတော့…ဒီ ကားက တျောတျောရယျရပါတယျ….အခှီတှကွေီးပွောထားသလိုကလိုထိုးအတငျးရယျခိုငျးတာမြိုးတှမေဟုတျဘဲ တဈစိမျ့စိမျ့ရယျရတာမြိုးတှပေါ….ဇာတျလမျးလေးလညျးအတျောမိုကျရှာတာမို့ ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး….
ကား မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် ဒရ်ရှန်ဆိုတဲ့ အဖွားကြီးတစ်ယောက် ကိုမာဝင်ပြီး သတိလစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆူနီးလ်ဘတေဂျာဟာ မိန်းမနဲ့ ကွာခါနီးအခြေအနေဖြစ်နေပြီး သူက သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကို အကူအညီတောင်းတယ်….
အမေနေကောင်းတဲ့အခါ အိမ်ပေါ်က ဆင်းပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး အိမ်မှာကပ်နေပါတယ်…ကပ်နေတဲ့ကာလကလည်းသိပ်မများရှာပါဘူး …နှစ်(၃၀)ပဲရှိပါသေးတယ်….သားသမီးတွေတောင်အရွယ်ရောက်ကုန်ပြီ…အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့ကတိအတိုင်း အမေနေကောင်းပြန်သတိရမှ ဆင်းဖို့သဘောတူထားလေတော့နှင်ချဖို့လည်းတိုင်ပတ်နေတယ်…
ဒီလိုနဲ့ နှစ်(၃၀)ပြည့်ပြီးလို့ တစ်ရက်မှာ အမယ်အိုကြီးသတိရလာတဲ့အခါမှာတော့…ဒီ ကားက တော်တော်ရယ်ရပါတယ်….အခွီတွေကြီးပြောထားသလိုကလိုထိုးအတင်းရယ်ခိုင်းတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲ တစ်စိမ့်စိမ့်ရယ်ရတာမျိုးတွေပါ….ဇာတ်လမ်းလေးလည်းအတော်မိုက်ရှာတာမို့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး….
Ex – Link 1
Wall Lover – Link 3
Young Mother – Link 3